ကျွန်တော့်ရဲ့ ဖွားသက္ကရာဇ်က 1988 ခုနှစ်
အခု 2009 ခုနှစ်ဆိုတော့
ကျွန်တော်အသက် 21 နှစ်ပေါ့
ဒါပေမဲ့ . . . ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်မေး
မင်း ဘယ်သူလဲ? ငါဘယ်သူလဲ?
မင်း ဘယ်သူလဲဆိုတာ ငါမသိသလို
အဖြေက ယောင်ဝါးဝါး ၀ိုးတိုးဝါးတာပါပဲ
မွေးစကတည်းက အမှောင်ခန်းထဲမှာ မွေးခဲ့တဲ့ငါ
ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ပြောနေကြတဲ့
IT ခေတ် globalization ခေတ်
20 ရာစုမှ 21 ရာစုကိုပြောင်း
ဒါပေမဲ့ ခေတ်တွေက ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း
20 ရာစုမှာ မွေးလို့ 21 ရာစုထဲ ရောက်ခဲ့တဲ့ ငါ့ရဲ့ ဘ၀
ဟိုး ကမ္ဘာဦးအစ ကျောက်ခေတ်ဘ၀နဲ့
ဘာမှ မခြားနား မကွဲပြား
အရာအားလုံးဟာ ၀ိုးတိုးဝါးတား ယောင်ဝါးဝါးပါပဲ
ဒီလိုနဲ့ သိချင်လို့ ပြည်သူတွေကို ကျွန်တော်မေး
1988 is my date
Now ..... 2005
But I asked myself
I don't konw who you are
I was in the dark since I was born
my eyes and ears are closed
Everythings are uncertain
Todays' world is changing
computer and Internet ear
I.T and globalization age
Changed from 20th to 21st century
It's said it isawonderful opprtunity
to learn the two centuries
But no matter how centuries change,
unchange is my life
I was born in 20th century and living
Oh....my life is no different than stone age
Everthings are still uncertain
So, So, So, .... in order to know,
I asked the people
for the facts?
Posted by Ashin dhamma at 8:12 AM